Sida loo Undelete Notes on iPad (oo ay ku jiraan dhammaan tusaalayaashii)
> Resource > iPad > Undelete Notes on iPad 1/2, iPad cusub, iPad la isha bandhigay & mini iPad
Waxaan undelete karaa qoraalada ku iPad mini?
Waxaan abuuray badan qoraalada on my iPad oo waxaan iyaga u qabay muddo dheer. Waxay arrin muhiim ah in aan ganacsi ahaayeen. Xaaskeyga qalad ah oo dhan iyaga tirtiray markii ay soo ciyaaray on my iPad. Waxaan lahaa gurmad Lugood on my computer guriga, laakiin hadda waxaan ahay on safar ganacsi aan. Waa wax deg-deg ah. Waxaan undelete karaa kuwa qoraalada on my iPad? Talo ahaan waxtar leh si aan ganacsi lahaa. Thanks badan.
Haddii aad qabto wax gurmad Lugood, waxa ay noqon doontaa fududahay in ay dib u helaan qoraalo aad hore ee iPad. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inay si fiican u soo celin ah. Ma aha in gurmad Lugood? Habkan waa badan doonaa idiin, si toos ah undelete qoraalada kuwa on your iPad. Sidee? Iyadoo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) , oo aad samayn kartaa in qasabno dhowr on your computer.
Fiiro gaar ah: versions Windows iyo Mac Labada qoraalada undelete ka iPad 1/2, iPad cusub, iPad bandhigay isha iyo iPad mini aad ha.
Hadda, bal aynu wada isku day version Mac ah talaabo talaabo ah. Haddii aad tahay qof user Windows ah, oo aad qaadi karto si la mid ah sidii dabagal.
Qoraalada Undelete ka iPad 1/2, iPad cusub, iPad la isha bandhigay & mini iPad
Orod barnaamijka on your computer iyo interface ugu weyn ee muujinaysa sida dabagal. Connect aad iPad in computer ka, ka dibna dooran hab dib u soo kabashada, ka soo kabsado Device macruufka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah u qoraalada undelete ku yaal baarista iPad.
Haddii aad isticmaasho iPad bandhigay isha, iPad mini, iPad cusub ama iPad 2:
Haddii aad isticmaasho iPad 1, barnaamijka eegi doonaa sida tan:
Tallaabada 2. Sawirka aad iPad in undelete qoraalada ku yaal
Hadda riix Start Scan in Windows hoose si scan qoraalada tirtiray on your iPad (saarayso iPad 1), si aad iyaga undelete karo.
Haddii aad isticmaasho iPad 1, waxaad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka hoose si aad u hesho hab iskaanka ka hor inta aanad iskaan:
Hay iPad 1, oo guji badhanka Start ku Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) 's uu furmo suuqa.
Marka aad bilowday, riix badhanka Power iyo button Home ku saabsan iPad 1 waqti isku mid ah muddo 10 ilbiriqsi.
Ka dib markii in, sii daayo button Power sida uu ogeysiiska ku saabsan barnaamijka, laakiin sii riixaya badhanka Home for kale 15 ilbiriqsi.
Marka aad hesho hab iskaanka ah, barnaamijka la bilaabaa aad ka baareyso iPad.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo undelete qoraalada ku iPad
Marka scan ka baxayo, waxaad ku eegaan karo xogta recoverable ku yaal. Wixii qoraalo, guji Notes dhinaca bidix ee barnaamijka, oo markaas waxaad ku eegaan karo faahfaahinta. Fiiri kuwa aad rabto in aad undelete oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.